Nirotsaka ho kandida ny filohan’ny Tetezamita teo aloha ary hoy ny mpanohana azy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fa ny hevi-dehibe tena nanaitra ny saiko dia ireto:
- Hanenjika ny fahatarana nandritra ny 58 taona izy am alalan'ny fampandrosoana haingana sy maharitra fa tsy kabary toy ny mahazatra ny sasany fotsiny.
- Hanangana fotodrafitrasa marobe eran'ny faritra sy herinatra sy sekoly sy hopitaly am faritra sy kominina rehetra.
- Hamafa an'ireo tsy fanjariana rehetra vitan'ny teo aloha na izay tsy mety rehetra natao teto am firenena fa efa niomana izy, efa niova, efa matotra, ary efa voasedra.
- Hanangana seha-pamokarana maro eran'ny faritra am alalan'ny velaran-tany midadasika mba handresena ny tsy fahampian-tsakafo sy fanafaram-bary isan-taona.
Fa ny tena nanaitra ahy ka nahafaly ahy manokana dia ny fanipihany fa tsy handefitra mihitsy izy amireo mpangalatra sy mpamono olona sy mpanolana sy mpanao kidnapping. Tezitra mihitsy aza izy niteny an'ireo ka nampiasa ny voambolana "tsy hitsitsy" mihitsy amireo olona tsy valahara tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy mataho-tody ireo, ka hisy helikoptera 10 hampiasaina am tsy fandriampahalemana, ary io kidnapping-kidnapping io dia hataony mahita azy fa tezitra mafy mihitsy Ingahirainy na dia nasehony am vazivazy azy izany.
Io tsy fandriampahalemana io rahateo no mampikaikaika ny olon-drehetra na ambanivohitra na andrenivohitra, na tompontany na vahiny, ka mila vahaolana maika, mahomby ary maharitra satria ny fandriampahalemana no miantoka ny famokarana sy fihariankarena sy fiarahamonina milamina ka mampandroso ny firenena eo am lafiny rehetra.
Izany no olona tapa-kevitra hitondra ny tany sy ny fanjakana fa tena niomana sy vonona amin'ny angady sy ny harona, am lafiny rehetra: ara-kevitra, ara-bola, ara-tetikasa, fa ny sasany na ny harona sy angady aza mbola hokarohina na hindramina ?!
Ny tena marina dia leo an'ireo mpitondra tsy nitolona ireo aho sy ireto zaza navelany rehetra ireto, ka ny tolona nataoko hahatsara kokoa ny fiainana hatram 72, 91, 2001, 2009 no lazainy fa nanimba firenena sy nampahantra vahoaka. Ka ny hifanandrina amin’ireo rehetra nanimbazimba ny tolom-bahoaka mihitsy no hirotsahako hifanandrina amin'izy ireo ka ho hita eo izay handresy sy harahin'ny vahoaka mpifidy sy mpitsara, fa tsy ny vavaben'ireo mpamadika sy mpanaratsy sy tsy manan-katao afa-tsy fankahalana sy fanatisma akory ?
Fa aoka fotsiny tsy hanana esprit autarcique na nationalisme primaire toy ny courant de pensée voizin'ny sasany aty Dago ise fa io fankahalana vahiny sy ny fiaraha-miasa am frantsay sy karana sy sinoa sy...arabo io no tena leitmotiv-ny zanak'i Dada sy zanan-dRangory sy Zana-baratra rehetra ka mitandrema ihany am approche sy ny penchant fa relation de partenariat win-win ihany no tsy maintsy ataon'ny mpitondra patriote et souverain eto am firenena fa tsy otran'ny taloha intsony. Dubaï anie oa miara-miasa am firenena 120 fa tsisy hoe fefiky ny vahiny ny harenany sy ny kolontsainy e, finoana sy kolontsaina musulmane foana no iainana ao dia izy koa no mametraka ny règle du jeu!
(Nalaina tao anaty Facebook, tsy notononina ny olona nanoratra fa ny hevitra no tiana hasongadina)